Wararkii Ugu Dambeeyay Khasaaraha Dagaalkii Ka Dhacay Xaafado Ka Tirsan Muqdisho | XORRIYA NEWS
Home Wararka Wararkii Ugu Dambeeyay Khasaaraha Dagaalkii Ka Dhacay Xaafado Ka Tirsan Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay dagaal xoogan oo xalay ka dhacay xaafaddo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, kaasi oo u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya.
Dagaalkaas ayaa waxaa uu xoogiisu ka dhacay xaafadaha Tarabuush iyo Kaawo Gudey ee Wadajir, wuxuu sigaar ah u dhexmaray ciidamo ka tirsan Booliska kuwa Milateri ah oo ku sugnaa halkaas.
Dad goobjoogayaal ah ayaa waxaa ayaa sheegeen in dagaalka uu yimid, kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa Booliska ay howlgal ka bilaabeen xaafadda Tarabuush oo la sheegay in xalay laga tuuray Madaafiic ku dhacday gudaha xarunta AMISOM ee Xalane.
Intaas kadib, ayaa ciidanka Booliska ee waday howgalka waxaa la tilmaamay inay isku dayeen in baaritaano ay ku sameeyaan guri uu degan yahay Sarkaal ka tirsan ciidanka Milateriga oo lagu magacaabo Bile Afdheere, hayeeshee ay iska caabin kala kulmeen Ciidamo Milateri ah oo la joogay Sarkaalkaas.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filiah, Taliyaha Ciidanka Booliska Gen. Xijaae ayaa ku baxay dagaalka ka dhacay Wadajir, iyagoo kala dhex-galay Ciidamada, sidaasina uu ku joogay dagaalka oo socday mudo ku dhow hal saac.